Vary amin'anana ravin-tsalady sy saucisse - Voyage à Madagascar
Vary amin’anana ravin-tsalady sy saucisse
par Gaël RAKOTOVAO	 31 octobre 2016
Indro atolotra anareo anio ny fomba fikarakarana vary amin’anana ravin-tsalady sy saucisse. Mitovitovy amin’ny vary amin’anana sy kitoza ihany no fanaovana azy ka dia mazotoa mamerina ary.
Fomba fikarakarana vary amin’anana ravin-tsalady sy saucisse
Endasina ny tongolo oignons. Arotsaka ny patsa mena ary avela ho mendimendy.
Arotsaka ny vary sy sira sy rano mahamasaka azy.
Rehefa handroso azy vao arotsaka ny ravin-tsalady voatetika sy coriandre ary saucisse efa masaka raha tiana.
Madagascar vary amin’anana
Ity misy toro-hevitra ra toa ka somary may ilay saucisse natono: asiana sakay dia tsy heno intsouny ilay tsiron’ny may.
madagascar vary amin anana, sakafo malagasy, vary amin anana recette, vary amin anana recipe, vary amin anana ricetta
Article précédent : Pizza à la saucisse fumée et aux poivrons
Fricassée de poulet aux champignons noirsArticle suivant :